Navoaka ny fanavaozana OpenShot 2.0 vaovao | Avy amin'ny Linux
pedrini210 | | fampiharana, GNU / Linux, About us
Amin'ny 9 Febroary, fanavaozana ny OpenShot 2.0.6 (Beta 3), izay efa azo alaina. Openshot dia mpamoaka horonantsary noforonina sy nohavaozin'ny programmer sy ny developer Jonathan Thomas, toy izany koa mpamorona ny fanavaozana ny sampana 2.0 an'ny fampiharana ity, nomarihiny fa mbola be ny asa tokony hatao, na izany aza, ity fanavaozana vaovao ity dia misy sarimiaina 3D, hetsiky ny fakan-tsary miorina amin'ny fiolahana, firafitra, tetezamita, fampifangaroana raki-peo, lohateny vektor, ary fiasa vaovao maro hafa.
Toy izany koa, nanondro i Thomas fa ity no andiany faha-3 feno an'ny OpenShot 2.0 tao anatin'ny 30 andro farany ary miara-miasa akaiky amin'ireo mpanapa-kevitra sy mpampiasa hamaha ireo olana manahirana indrindra hita izy ireo.
Raha liana ianao manandrana dia ho faly ianao hahafantatra fa ny installer beta dia navotsotra ho an'ireo mpampiasa te-hisintona azy ireo, ary azonao atao eto izy ireo:
Windows: Fametrahana 2.0.6 MSI Installer
Linux: Tsy maintsy mametraka ianao PPA isan'andro (ho an'ny Ubuntu sy mifandraika). Ankehitriny koa i Debian, Arch ary Gentoo dia manohana ny OpenShot 2.0
Animations: Malemy izaitsizy tokoa, ka nampitahaina tamin'ny landy. Ny zoom, ny lapoaly ary ny fihodinana dia tombony sasany amin'ity fanovana ity.
Audio: Nihatsara, mitantana ny mandresy ny an'ny kinova teo aloha, ny olana audio toa ny pop, drips sy ny hafa raikitra amin'ity kinova vaovao ity.
Famerenana mandeha ho azy: motera vaovao iray manontolo no natsangana OpenShot 2.0, natao ho haingana sy mora hapetraka, mitantana hitahiry ho azy ny tetikasanao amin'ny elanelam-potoana manokana. Ilaina ny manamarina raha toa ka alefa amina fikirakira ity safidy ity.
Fanarenana: Miaraka amin'ny fahafaha-miasa nomaniny ho solon'izay vaovao, ny fiasa fanarenana koa dia navitrika sy nampidirina. Raha tsy nitahiry ny tetikasanao ianao dia tsy ilaina hatahorana, noho ny motera fitehirizana mandeha ho azy vaovao, ho voatazona ny tetik'asa tsy voavonjy (miaraka amin'ny fahita matetika mitahiry izay namboarinao taloha), ary raha nianjera ny OpenShot, dia haverina ny backup farany farany.
Fitantanana rakitra: Fanatsarana marobe no natao tamin'ny fikirakirana ny fisie tetikasa, ao anatin'izany ny fanatsarana ireo rakitra vonjimaika voatahiry ao anaty lahatahiry (izany hoe lohateny mihetsika).
Fanaraha-maso manokana: Ny fampidirana ny libopenshot (tranomboky fanovana horonan-tsary) sy ny openhot-qt (interface an'ny mpampiasa PyQt5) dia nohatsaraina. Ankehitriny ny mpampiasa dia manolotra a hafatra diso milaza andinindininy sasany momba ny zava-nitranga. Mazava ho azy, ny "fianjerana mafy" izay mamono ny zava-drehetra mbola misy indraindray, na izany aza, maro ny lozam-pifamoivoizana azo sorohina izao ary ampahafantarin'ny mpampiasa bebe kokoa ny zava-nitranga.
Fahamarinana amin'ny Windows: Ny fisian'ny lesoka tsy dia mahafinaritra loatra ao amin'ny Windows, izay raha ny teôria dia tokony niseho niaraka tamin'ny sehatra hafa, dia vokatry ny lesoka mifandraika amin'ireo mpikirakira maro amin'ity rafitra ity, ireo lesoka ireo mbola tsy namboarina ary maro amin'izy ireo no raikitra ankehitriny.
Fampandrenesana kinova vaovao: OpenShot dia hanamarina ny fisian'ny kinova famoahana farany avy amin'ny tranokala openshot.org, ary hampandre ny mpampiasa amin'ny fampisehoana kisary eo amin'ny farany ambony ankavanan'ny varavarankely lehibel. Ity fangatahana vaovao ity dia nangataka hatry ny ela ny mpampiasa, fa izao dia nomena ihany. Ampandrenesina mangina ihany koa izy raha tsy misy ny Internet na raha tsy misy, izay tanterahina misaraka, ka manakana ny fampiharana tsy hiadana.
Tatitry ny bibikely tsy fantatra anarana: Fahaizana vaovao hitaterana bug momba ny tsy fantatra anarana no nampiana tao amin'ny OpenShot. Ity safidy ity dia azo alefa sy hofoanana amin'ny preferences, ary indraindray indraindray enymandefa tatitra tsy mitonona anarana momba ny bibikely, izay hanampy hamantatra ny toerana nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana.
Hisintona marina: Nisy olana madinidinika toy ny fanampiana toerana eo anelanelan'ny clip, ny transitions na tsy mandeha amin'ny toerany, ireo olana ireo dia efa namboarina ary mandeha tsara izao.
fandikan-teny: Nisy fanovana natao Fiteny 78 tohanana, izany noho ny asa mafy ataon'ireo mpandika teny marobe izay niasa tsy nisy fiasana.
Na dia betsaka aza ireo fanavaozana sy fanatsarana hitantsika, mbola misy lesoka maromaro hatrany aseho toy ny: lesoka fanondranana DVD amin'ny kinova Linux sasany, olan'ny fandikana sasany amin'ny fiteny sasany. Toy izany koa, mpampiasa sasany nitatitra olan'ny fitoniana amin'ny Windows, izay mbola ny antony tsy mbola voafaritra, na izany aza dia azo inoana fa mifandraika amina processeur marobe izy ireo ary maromaro amin'ireo toe-javatra izay toa tsy misy ao amin'ny Windows fotsiny.
Raha efa nisintona an'ity kinova vaovao ity ianao na mikasa ny hanao izany dia tokony ho fantatrao fa ny OpenShot dia mitaona ny mpampiasa hiditra amin'ny orinasa, mangataka mandefasa tatitra sy sosokevitra momba ny bibikely any: https://github.com/OpenShot/openshot-qt/issues. Azonao atao ihany koa fanampiana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fandikana (Raha mpampiasa manana fiteny hafa ankoatry ny Anglisy ianao) dia azonao atao izany eto: https://translations.launchpad.net/openshot/2.0/+translations.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Navoaka ny fanavaozana OpenShot 2.0 vaovao
0 hevitra, avelao ny anao